🥇 Ukuphendula ngezimali kumalungiselelo
Inqanaba: 4.9. Inani lemibutho: 822
Ukuphendula ngezimali kumalungiselelo
Ividiyo ye-accounting ye-logisticians
Uku-odolwa kwengxelo kubaphathi bezinto
Inkqubo ye-USU-Soft logisticians 'yolawulo lobalo-mali yiprojekthi yokuqinisekisa ukuhanjiswa kwempahla yeemveliso ezahlukeneyo. Isicelo siyilelwe ngokungqinelana nayo yonke imigangatho eyimfuneko, ekufuneka iqinisekise ubukho balo msebenzi. Iimpawu ezikhoyo zeqonga zivumela ukunyusa iindleko zokujikeleza. Isoftware yolawulo lwemithwalo yemithwalo yabalungiseli beempahla inokunceda iifemu ukubonelela ngeliso elibukhali kwindlela yeempahla. Inkqubo ibeka inqanaba lokusetyenziswa kwesithuthi, kunye nokufumana eyona nto ifunekayo. Inguqulelo yasimahla yovavanyo lwesicelo se-logisticians 'yolawulo lobalo-mali yenzelwe ngokukodwa ukukuvumela ukuba ufunde ukusebenza kwiijenali zombane nakwiirejista. Kwixesha lethu, kubaluleke kakhulu ukufumana isixhobo esifanelekileyo solwazi (umz. Iinkqubo zokwenza izinto zokuhambisa iimpahla). Amalungiselelo atyhutyha inqanaba lawo elitsha lophuhliso enkosi kulungelelwaniso lwetekhnoloji ephezulu. Abenzi bezinto bahlala bezama ukwazisa ukuphucula, kwaye ngenxa yesi sizathu, imisebenzi encedisayo ivela xa kusenziwa iintshukumo zasekhaya zeengcali.
Ukusetyenziswa okugqwesileyo kolawulo lwezothutho lwabaphetheyo be-logisticians 'kubaluleke kakhulu emsebenzini wabaphetheyo. Ukuphuhliswa kwee-odolo, ngokungqinelana neempawu ezahlukileyo zeemveliso, ngokuqinisekileyo kuya kukhawuleziswa kunye nesoftware yabaphengululi benkqubo yobalo esemgangathweni. Abavelisi abaninzi beenkqubo zokunikwa kwengxelo kubaphathi bezixhobo babonelela ngoluhlu oluncinci lwemisebenzi (umz.iprojekthi yokuhanjiswa kwempahla 1C). Inkqubo ye-USU-Soft ye-logisticians iqulethe uluhlu olubanzi lwamathuba kwiinjongo zecandelo ngalinye lezoqoqosho. Inkqubo yocwangciso-mali yabalungiselela ukuloba ithathwa njengeyona nto iphambili kwimisebenzi yekhaya. Isoftware ijongana nokufakwa kwedatha rhoqo ngokulandelelana kwexesha. Ekupheleni kwalo naliphi na inqanaba, linika ulwazi oluqokelelweyo olunefuthe elikhulu kuphuhliso lwenkampani.
Kwindlela yokusebenza, iinkqubo zobuchwephesha ezikhethwe ngokuchanekileyo zenza ukuba kuphuculwe inkonzo yabasebenzi, ke kufuneka babeke iliso kwimeko yesithuthi sonke xa sisebenza. Kwiinkampani zamalungiselelo, isabelo esibalulekileyo semali ephambili sibolekwe ngokuthe ngqo zizithuthi, ke oku kubaluleke ngokukodwa. Inkqubo yethu yokuhanjiswa kwezinto inokukhutshelwa simahla njengenguqulo yedemo. Kwangelo xesha, kwanele ukuqhakamshelana neenkqubo zethu kwaye uya kufumana ikhonkco elisebenzayo elingenabungozi lokukhuphela isilingo sasimahla. Inkqubo yokuphuculwa kwempahla ukulungiselela ukuthuthwa kwempahla kunganceda ukudibanisa iiodolo kunye nokwenza amanyathelo okhuseleko afunekayo kwishishini lezothutho. Ngalo naliphi na inqanaba lonikezelo lweenkonzo, amaxwebhu athile ayimfuneko ngeenjongo zolawulo, zombini ngenxa yeendlela eziya kwiidilesi, nakwindawo yeedilesi zemisebenzi kunye neendlela zenkampani elungiselela ulungiselelo, okanye ngenxa yemida yayo. Inkqubo yokulawulwa kwempahla ukulungiselela abagcini benkonzo ikuvumela ukuba ugqithise uxanduva oluthe ngqo lwabasebenzi kunye nokwenza imeko yokuqhubeka kweshishini Ngombulelo kwinkxaso yetekhnoloji yamva nje kulungiselelo, ukwenziwa okuzimeleyo kweendleko ezininzi kuyaphunyezwa. Unokuzikhuphelela isilingo sasimahla sesoftware kweli phepha.
Inkqubo ye-accounting logisticians 'yolawulo kunye nokwenza ngcono ukuthuthwa kwemithwalo ngeedilesi kunye neendlela ziqala ukubala ukuthuthwa kwemithwalo yeekhonteyina ngophuhliso lwedatha eqhelekileyo yeekhontrakthi. Inkqubo yokulawulwa kunye nokwenza ngcono ukuthuthwa kweekhonteyina iqulethe uninzi lweempawu zentsebenziswano yamaqabane kunye nabaxhasi. Ukongamela ebaleni kunye nomxholo wokusebenza kakuhle kwezothutho kukhokelela kulungelelwaniso lwezicelo ngokungqinelana ne-geolocation kunye nobume. Ukulawula ukuhanjiswa kwekhuriya, inkqubo yokulawula inkonzo yokuhambisa ithathela ingqalelo inani elingenamda leeodolo. Inkqubo ye-accounting logisticians 'inceda ukwandisa ukuthandwa kwenkampani. Iinkonzo zomnxeba nokuthumela imbalelwano nge-imeyile ziya kufumaneka simahla kuwe. Ulawulo lwenkampani alufuni nangayiphi na indlela utyalo-mali lweendlela ezincedisayo. Ukusebenza kwemali kweenkampani zamalungiselelo kuya kuxhomekeka kakhulu kwinkuthazo ekujoliswe kuyo kunye nenkuthazo.
Inkqubo ye-logisticians 'accounting iya kubonelela ngethuba lokutyala ngokufanelekileyo uhlahlo-lwabiwo mali lwaseburhulumenteni kungekudala. Isicelo sinemixholo emininzi yokwenza ujongano. Inkqubo yendlela yezithuthi ikuvumela ukuba wenze ngokwezifiso uyilo lwewindows kuye nawuphi na umsebenzisi. Inkqubo ikuvumela ukuba udibanise iimpahla ngendawo oya kuyo. Ukunika ingxelo ezenzekelayo yindlela entle yokugcina abasebenzi ekwenzeni imisebenzi yesiqhelo kunye nokufumana ulwazi oluchanekileyo noluthembekileyo malunga nemeko yokwenene yenkampani. Isoftware inokuvelisa iingxelo ngohlobo lweegrafu, iidayagramu okanye iitafile- ngokhetho lwakho. Isoftware ibeka ulawulo kuyo yonke iodolo eyamkelweyo yokusebenza. Abasebenzi abayi kudida nayiphi na imiqathango, imiqathango okanye iinkqubo. Kulawulo, kubalulekile ukuba kuthathelwe ingqalelo izenzo zabasebenzi. Ulawulo oluzenzekelayo luya kubonisa intsebenzo yokwenyani yomqeshwa ngamnye. Inkqubo ibala imivuzo kwaye ibonise abo bakufaneleyo ukunikwa. Ukuhamba koxwebhu lwezothutho kungqongqo; akufuneki kubekho iimpazamo kuyo. Inkqubo yokugcwalisa iifom, izenzo, ii-invoyisi ziya kuhlala zinceda ukukhawulezisa nangokuchanekileyo amaxwebhu kuyo nayiphi na intengiselwano.
Ukwenza ingxelo kunye nokulawulwa kwezothutho
Ukwenza ingxelo kunye nokuhlelwa kwezothutho
Ukwenza ingxelo ngeekhuriya
Ukwenza i-Akhawunti malunga nokukhutshwa kweefom zendlela
Ukwenza ingxelo ngoncedo lweenkonzo zothutho
Ukuphendula ngezimali kwimpahla yokusebenza
Accounting kwinkampani yezothutho
Ukwenza ingxelo kumbutho wezothutho
Ukwenza ingxelo ngezothutho lweemoto
Ukwenza ingxelo ngezothutho oluzenzekelayo
Ukwenza ingxelo ngamashishini ezothutho
Ukwenza ingxelo ngeshishini lezothutho
Ukwenza ingxelo ngezothutho lwempahla
Ukwenza ingxelo ngezothutho lwemithwalo
Ukwenza ingxelo ngeenkonzo zonikezelo
Ukwenza ingxelo ngeenkonzo zokuhanjiswa kweempahla
Ukwenza ingxelo ngezithuthi zothutho
Ukwenza ingxelo ngeempahla ezithengiswayo
Ukuphendula ngezothutho lwamanye amazwe
Ukwenza ingxelo ngezothutho lwabakhweli
Ukwenza ingxelo ngezicelo zothutho
Ukunika ingxelo ngeenkonzo zothutho
Ukwenza ingxelo ngeempahla
Ukwenza ingxelo ngokudityaniswa
Ukwenza ingxelo ngezothutho
Ukwenza ingxelo ngezothutho kunye nokuhanjiswa
Ukwenza ingxelo ngeenkonzo zothutho
Ukwenza ingxelo ngezithuthi nabaqhubi
Ukwenza ingxelo ngeenqwelo
Ukwenza ingxelo ngomsebenzi wezothutho
Inkqubo yocwangciso mali
Ijenali yezithuthi zokwenza ingxelo
Uhlalutyo lomsebenzi lweshishini lothutho oluzenzekelayo
Uhlalutyo lweshishini lothutho oluzenzekelayo
uhlalutyo lwenkampani yezothutho
Uhlalutyo lweendleko zothutho
Uhlalutyo lwamashishini ezothutho
Uhlalutyo lomsebenzi wezothutho
Isicelo sothutho oluzenzekelayo
Isicelo senkampani yezothutho
Inkqubo yolawulo lothutho oluzenzekelayo
Ukuzenzekelayo kwenkonzo yekhuriya
Ukuzenzekelayo kwe-accounting cargo
Ukuzenzekelayo kolawulo lwezothutho
Inkqubo yokuZenzekelayo yezothutho
Ukuphendula ngokuzenzekelayo kwezithuthi
Ulawulo lwezithuthi ezizenzekelayo
Ulawulo lokuhanjiswa kwemithwalo
Inkqubo yokuhanjiswa kwemithwalo
Ulawulo lokuhamba kwempahla
Inkqubo yolawulo lweCargo
Ulawulo lokuhanjiswa kwempahla
Inkqubo yolawulo lwemithwalo
Ugcino mali lokuhambisa iimpahla
Ulawulo lwezothutho lwemithwalo
Inkqubo yothutho lwemithwalo
Iitafile zothutho lwemithwalo
Inkqubo yokuhambisa iimpahla
Inkqubo yezothutho yemithwalo
Ulawulo lokuhambisa isikhongozeli
Ulawulo kunye nokuphathwa kwezithuthi zothutho
Ukulawulwa kwamashishini othutho oluzenzekelayo
Ukulawulwa kwezithuthi zothutho
Ulawulo lweshishini lothutho
Ukulawulwa kwamaxesha okuhambisa
Ukulawulwa kokuhanjiswa kwempahla
Ulawulo lweekhontrakthi zonikezelo
Ulawulo lokuthuthwa kwabakhweli
Ulawulo lweenkonzo zothutho
Ulawulo lwezothutho lwezothutho
Ulawulo lothutho lweemoto
Ulawulo lwezothutho lwempahla
Ulawulo lwezothutho lomthwalo
Ulawulo lwezothutho lwamanye amazwe
Ulawulo malunga nokwenziwa kwezothutho
Inkqubo yolawulo yothutho oluzenzekelayo
Inkqubo yolawulo kumalungiselelo
Iinkqubo zeCrim kulungiselelo
Inkqubo yolawulo lwenkonzo
Ukulinganisa isixhobo sedizili
Ukuhanjiswa kokuhanjiswa kwezothutho
Khuphela inkqubo yokuthuthwa kwemithwalo
Ulawulo lwezinto zokusebenza ezifanelekileyo
Iinkqubo ze-Erp kulungiselelo lwezinto
Ulawulo lokusetyenziswa kwepetroli
Inkqubo yolawulo lwe-Fuel
Inkqubo yokuhanjiswa kwempahla
Ulawulo lonikezelo lwempahla
Ukwandisa ukusebenza kweshishini lezothutho
Ulawulo lokuhamba kolwazi kulungiselelo
Iinkqubo zolwazi kulungiselelo lwezinto
Iinkqubo zolwazi zolawulo lwezothutho
Inkqubo yolwazi kulawulo lwezothutho
Ijenali yokuphendula ngezithuthi
Ijenali yobalo kuthutho lwemoto
ILogbook yothutho mali
Amalungiselelo nokulawulwa konikezelo
Amalungiselelo nokulawulwa konikezelo lweenkonzo
Amalungiselelo nokulawulwa kwezothutho
Amalungiselelo kunye nokulawulwa kwendawo yokugcina izinto
Inkqubo yolawulo lwamalungiselelo
Amalungiselelo ezothutho lwezothutho
Ulawulo lweshishini lothutho oluzenzekelayo
Ulawulo lwezothutho lweemoto
Ulawulo lwenkonzo yamalungiselelo
Ulawulo lwenkampani yezothutho
Ulawulo lwezothutho lwabakhweli
Ulawulo lwezothutho kaloliwe
Ulawulo lwezothutho lolwandle
Ulawulo lwamakhonkco onikezelo
Ulawulo lwenkqubo yonikezelo
Ulawulo lwesebe lolungiselelo
Ulawulo lwezothutho kwezothutho ezindleleni
Inkqubo yolawulo yezothutho
Inkqubo yolawulo yothutho lwezothutho
Ukulungiswa kwenkonzo yokuhanjiswa
Ulawulo lwe-odolo kwimpahla yokusebenza
Umbutho kunye nolawulo lwezothutho
Umbutho nolawulo lwezothutho
Ulawulo lokulawulwa kwempahla
Umbutho wokunikwa kwengxelo ngezothutho
Umbutho wokunikwa kwengxelo ngokuthuthwa kwemithwalo
Umbutho wezothutho lwempahla
Umbutho wezithuthi zendlela
Umbutho wolawulo lwezixhobo
Umbutho wezothutho ezindleleni lweempahla
Umbutho wenkqubo yokuhanjiswa
Umbutho wezothutho lweempahla kunye nabakhweli
Umbutho wezothutho kunye nolawulo kuthutho lwendlela
Umbutho wolawulo lwezothutho
Umbutho wocwangciso mali
Umbutho umsebenzi izithuthi izithuthi
Umbutho womsebenzi wezothutho
Ulawulo lwabasebenzi kulungiselelo
Ukucwangciswa nokulawulwa kwezothutho
Inkqubo yokuveliswa kwemveliso
Ulawulo lokubonelela ngemveliso
Iinkqubo zokunikwa kwengxelo yezothutho
Iinkqubo zolawulo lwezithuthi
Inkqubo yobalo lwezithuthi zothutho
Inkqubo yeenqwelo zokulwa
Inkqubo yolwabiwo mali
Inkqubo yeshishini lezothutho
Inkqubo yothutho lweemoto
Inkqubo yokulawulwa kwezithuthi
Inkqubo yenkampani yezothutho
Inkqubo yokudala iinqwelomoya
Inkqubo yokuzalisa ii-waybill
Inkqubo yeenqwelo moya
Inkqubo yothutho lwamanye amazwe
Inkqubo yothutho lwabakhweli
Inkqubo yezithuthi ezizenzekelayo
Inkqubo yoqwalaselo lweemoto
Inkqubo yenkonzo yekhuriya
Inkqubo yonikezelo lweenkonzo
Inkqubo yokuhambisa ezothutho ezindleleni
Inkqubo yomthumeli wezothutho
Inkqubo yombutho wezothutho
Inkqubo yamaxwebhu ezothutho
Inkqubo yeenkonzo zothutho
Inkqubo yothutho mali
Inkqubo yolawulo lwezothutho
Inkqubo yokubala yokuhamba
Inkqubo yamashishini ezothutho
Ilog yobhaliso lothutho oluzenzekelayo
Iingxelo zeshishini lothutho oluzenzekelayo
Ulawulo lwezothutho ezindleleni
Isicelo seSoftware yokuhambisa imithwalo
Ulawulo lokulawula kunye neenkqubo zolawulo
Inkqubo yolawulo lokujonga
Inkqubo yokunikwa kwengxelo
Inkqubo yolawulo lokubonelela
Inkqubo yeshishini lothutho oluzenzekelayo
Inkqubo yothutho oluzenzekelayo
Inkqubo yolawulo lwezithuthi
Inkqubo yokwenza izinto
Inkqubo yenkonzo yokuhambisa
Inkqubo yothutho yezothutho
Inkqubo yothutho lomthwalo
Inkqubo yokuhambisa abakhweli
Iitafile zothutho oluzenzekelayo
Itheyibhile yeempahla ezihanjiswayo
Ezothutho nolawulo lwezothutho
Inkqubo yobalo lwezothutho
Ulawulo lwezothutho kunye nokugcinwa
Ukuzenzekelayo kwenkampani yezothutho
Ulawulo lwamashishini ezothutho
Inkqubo yolawulo lwamashishini ezothutho
Izinto zokuhamba ezizisebenzelayo
Ulawulo lwezinto zokuhamba
Iinkqubo zolawulo lwezinto zokuhamba
Ulawulo lwezothutho kwishishini
Inkqubo yezothutho yekhompyuter
Ikhadi lobalo zimoto
Ukusetyenziswa kwezithuthi accounting
Iindlela zokwenza ingxelo
Ijenali yeWaybills accounting